इन्द्रावती तिमी राज गर, म भक्ती गाउँछु । (फोटो फिचर) « KhabarGhar – Nepal's No. 1 News Portal
इन्द्रावती तिमी राज गर, म भक्ती गाउँछु । (फोटो फिचर)
कुनै बेला अविरल बग्ने इन्द्रावती । हिजोआज त्यहि अवस्थामा बगेको छ कि छैन् होला ? इन्द्रावती आसपासका स्थानीयले त देखेकै छन् । त्यो भन्दा बढी इन्द्रावती दोहन गरिरहेकाले मज्जाले हेरिरहेका छन् । स्थानीयहरु बेलाबखत कराउँछन्, इन्द्रवती केहिदिन संलिएर बग्छ । फेरी उस्तै भै हाल्छ ।
बगरमा खेती गर्दै आएका स्थानीयहरुको खुशी लुटेर क्रसर ब्यवसायीले प्रशासनकै धज्जी उडाइरहेका छन् । स्थानीयको भनाईमा प्रशासनकै मिलेमत्तोमा उनीहरुले नदीलाई जुकाले चुसे झै चुसिरहेका छन् । जुकाको त सिजन आउँछ । रगतले टन्न भएपछि झर्छ । तर नदी चुसिरहेकाहरुको न कुनै सिजन छ । न त कुनै बिश्राम । शान्त, कञ्चन सुसेली हाल्दै बग्ने इन्द्रावती तिमीलाई हिजो आज किन सङ्लिएको देख्नै सक्दैन् । ती मान्छेहरु । जो मान्छेले तिम्रो अस्मिाता लुटिरहेका छन् । किन भेला, बाढी बनेर बनाउँदैनौँ ।
तिमीलाई सधै धमिलो बनाइरहने संरचनालाई ।तिमी बग्ने सतह साविकको भन्दा झण्डै ५ फिट गहिरिसकेको छ । साउनको भेलले बचेका बगर टाकुरा जस्तै बनिसके । स्काभेर प्रयोग गरेर तिम्रो स्वतन्त्रतालाई छेकिरहेका छन् । आफ्नो अनुकुल बाटो बनाएर, ढुंगा निकालिरहेका छन् । इन्द्रवती के तिमी हिड्ने बाटो कहिले सिधा हुन्छ ? माझी समुदायको छाक खोसिएको छ । भूकम्पप्रभावित वस्तीले तस्करहरुलाई नियाली रहेछ । गत बैशाखमा सकिएको चुनाव पछि संलिएर बक्ने सपना त तिम्रो पनि थियो होला । तर त्यो पुरा हुने छाटकाट देखिएको छैन । तिमीलाई सङलो पार्ने भनेर हामीसँग भोट मागेर जितेकाहरु पनि अहिले धमिल्याउनेहरुसँगै पो मिलेका छन् अरे ।
सिडियो, एसपीको नेतृत्वमा बेला बखत एक हुल मान्छे तिमीलाई नियाल्न त आइपुग्छन् । तिम्रो पिडामा मोलम लगाउन भन्दै । तर तिम्रो पिडा एक,दुईवटा सिउरमा साटेर फर्कछन् । सुनेको छु तिम्रो पिडामा अझ धेरै रमाएउँदै कयौँ हात्तिको बथान सुर्के थैलीमा पोको पारेर फर्किएको । इन्द्रावती तिम्रो छातीमा राजहरु कति भक्त हुदाँ हुन ।
काठमाडौं २९ साउन । सरकारले आजदेखि देशभर सवारी पास वितरण बन्द गरेको छ ।बुधबार गृह
काभ्रेको तीन नगरपालिका छुने ‘पुन्यमाता करिडोर’ निमार्ण सुरु
बनेपा २८ साउन : काभ्रेको तीन वटा नगरपालिका भएर बग्ने पुन्यमाता खोलामा सडक निर्माणको काम
काभ्रेको संघीय प्रहरी कार्यालयका तिन प्रहरी सहित ४ जनामा कोरोना संक्रमण
धुलिखेल २७ साउन : काभ्रेको संघीय प्रहरी कार्यालयका तिन प्रहरी सहित ४ जनामा कोरोना संक्रमण
पाँचखालकी ५० बर्षीय महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु
धुलिखेल, २६ साउन : काभ्रे पाँचखाल नगरपालिका घर भएकी एक महिलाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको
काभ्रेको भुम्लुमा १९ वर्षीय पुरुषमा कोरोना संक्रमण, वडा नं ६ सिल गरियो
धुलिखेल २६ साउन : काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिकामा १९ वर्षीय पुरुषमा कोरोना सक्रमण देखिएको छ ।
‘हिटलर र यहुदी’ शीर्षक उपन्यासको विश्लेषण
फ्रायडीय यौन मनोविज्ञानबाट प्रभावित, नारी स्वतन्त्रता तथा नारी अस्तित्वका पक्षधर, सम्प्रेष्य भाषाशैलीका प्रयोगकर्ता, मानवतावादी साहित्यकार
बीरगञ्ज, १ साउनः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान रामको जन्मभूमि अयोध्या पर्सा जिल्लाको ठोरीमा पर्छ,
काठमाडौं ३१ असारः नेपाली संगीत, रंगमञ्च, नाट्य तथा नृत्य क्षेत्रका ६ विशिष्ट साधकहरुलाई नेपाल संगीत